JINGHPAW KASA: ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော တစ်ဦး ကျဆုံး
ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော တစ်ဦး ကျဆုံး
နိုင်ဝင်ဘာ (၅) တနင်္လာ
လွန်ခဲ့သော အောက်တိုဘာ (၁၉) တွင် စီးအင်ရွာသားများကို နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သော ဗမာအစိုးရ စစ်ကြောင်းများကို ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၂) လက်အောက် တပ်ရင်း (၆) မှ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ နောက်တစ်ကြိမ် လိုက်လံ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤသို့ ဗမာစိုးရ စစ်ကြောင်းများကို လိုက်လံတိုက်ခိုက်ရာ ဗမာအစိုးရ ဘက်မှ အင်အားများလွန်းသောကြောင့် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော် လဂျာ ကျဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဗမာအစိုးရတပ်များသည် ဖားကန့် မော်မောင်းဘွမ်း ကိုမရမနေ ပြန်လည်တိုက်ခိုက် နေကြောင်း၊ လက်နက် ကြီးများဖြင့် အဆက်မပြတ် ပစ်ခတ်သောကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူ (၄) ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ နောက်ပြီး တာမခံ နမ့်မော်နှင့် ဆိုင်းတောင်ကြားတွင် ခရီးသည်တင်း ဟိုင်းလပ်ကား တစ်စီးကို ဗမာအစိုးရစစ်မှ ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် ကားနှင့်တကွ ခရီးသည် များအလုံး မီးလောက်ပြာကျ သွားကြောင်း ဆက်လက်သိရှိရပါသည်။
I love KIA and my country.
I want to kill them. The villagers are kill by them. Everyday, I hear the bomb, guns.
တစ်ယူသန် ကချင် ကေအိုင်အေ အတွက် ဘုရားသခင်က ပေးမဲ့ကောင်းချီးကတော့ ကောင်းကင်ဘုံကို အားလုံးမြန်မြန်ခေါ်သွားဖို့ပါပဲ